Waa maxay qorshaha cusub ee Wasiir Juxa kadib fashilka kulanka Galmudug iyo Ahlu-Suna? - Caasimada Online
Home Warar Waa maxay qorshaha cusub ee Wasiir Juxa kadib fashilka kulanka Galmudug iyo...
Waa maxay qorshaha cusub ee Wasiir Juxa kadib fashilka kulanka Galmudug iyo Ahlu-Suna?
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Arrimaha Gudaha Dowladda Federaalka Somalia Cabdi Faarax Saciid (Juxa), ayaa sheegay in Wasaaradiisa aysan wali ka khuusan isku keenida maamulka Galmudug iyo Ahlusunada Gobolada Dhexe.
Wasiir Juxa, ayaa tilmaamay inuu aaminsan yahay in labada maamul ay ka heshiin doonaan Khilaafka ka dhextaagan, waxa uuna intaa raaciyay in wax waliba ay kusoo dhamaan doonaan sidii loogu tallo galay.
Juxa, ayaa tilmaamay inay jiraan dadaalo kale oo leysugu geynaayo labada maamul waxa uuna meesha ka saaray in Wasaaradiisu ay ka gaabin doonto xalinta khilaafka labada maamul.
”Wasaaradu wali kama quusan isku keenida labada dhan waxan sameyn doonaa dadaalo ka duwan kuwii hore oo leysugu geynaayo labada maamul”
”Waxaan qabaa in khilaafka laga gudbo oo dib loo eego xaalada uu dalka ku jiro Wasaaradu dhinacyo badan ayay wax ka tusi doontaa labada maamul si leysugu soo dhawaado”
Juxa, waxa uu sidoo kale, sheegay inaanu jirin kulan fashilmay balse waxa uu tilmaamay in kulankii hore uu ahaa mid kusoo dhamaaday is fahan’waa keliya.
Juxa, ayaa xaqiijiyay inay jiri doonaan kulamo kale oo loo qaban doono labada dhinac si loo soo afjaro.
Haddalka Wasiir Juxa, ayaa imaanaya xili Ahlusuna ay shaacisay in DFS ay lamid noqotay dowladihii hore ee ku fashilmay xalinta khilaafka kala dhexeeya Galmudug.